ဂျပန်၊ in မြန်မာ၊ ရန်ကုန်၊ အွန်လိုင်းတွင်ဂျပန်စာသင်ယူရန်။ HH JapaNeeds
မြန်မာ၊ ရန်ကုန်၊ အွန်လိုင်းတွင်သင်ကြားခြင်း
သင်ခန်းစာ ဂျပန် စာ
ဂျပန်စာကိုကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ် အလိုအလျောက်ကိုက်ညီသောအွန်လိုင်းကျူတာများ ဖြင့်သင်ယူရန်ရုန်းကန်နေ ရသလား။ မရှိတော့ပါ။ သင်၏ဘာသာစကားနှင့်အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာတစ်ခုစီကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောကျူရှင်ဆရာများနှင့်သင်ဂျပန်စာသင်ကြားပါမည်။ သင်၏သင်ယူမှုဘာသာစကားကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောခရီးတစ်ခုဖြစ်စေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် HH JapaNeeds၊ ထိပ်တန်းဘာသာစကားအွန်လိုင်းကျောင်းဖြစ်သည်။
HH JapaNeeds ၏အင်္ဂါရပ်များ
သင့်အနီး၌ဂျပန်၌သာမကဂျပန်အပြင်အခြားနိုင်ငံများတွင်လည်းသင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်သင်ခန်းစာယူနိုင်သည်။ သင့်ဒေသတွင်သင့်အတွက်ဂျပန်ဆရာတစ် ဦး ရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ တောင်းဆိုပါ။
မည်သည့်နေရာ၌ပင်နေထိုင်ပါစေအနီးအနားရှိကဖေးများ၊ အများသုံးနေရာများ၊ အိမ်များ၊ ရုံးများတွင်ဂျပန်အထိန်းတစ် ဦး နှင့်သင်တွေ့ဆုံနိုင်သည်။ သင်၏နယ်မြေတွင်အထိန်းမရှိသူဖြစ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ခဏစောင့်ပါ၊ အွန်လိုင်းအတန်း။
သင်လိုအပ်သည့်အကောင်းဆုံးဂျပန်နည်းပြဆရာနှင့် ပတ်သတ်၍ အမြန်မေးခွန်းများကိုဖြေပါ။
HH JapaNeeds ဂျပန်စာကျောင်း၏နည်းပြဆရာသည်သင့်အားမြန်မာ၊ ရန်ကုန်၊ အွန်လိုင်းရှိသင်နှင့်သင့်တော်သောဂျပန်ဘာသာစကားမိတ်ဖက်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆရာကိုရွေးချယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဂျပန်စာကိုလေ့လာလိုလျှင်ဂျပန်စကားပြောဆိုမှု၊ JLPT သင်တန်းကိုမြန်မာ၊ ရန်ကုန်နှင့်အွန်လိုင်းရှိဂျပန်စာဆရာများဖြင့်သင်ကြားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ပုံတင်ထားသောဆရာဒေတာဘေ့စ်ကိုနေ့စဉ်မွမ်းမံသည်။ အကယ်၍ သင်ကဆရာ၊ ဆရာမနှင့်တွေ့ဆုံခြင်းကိုလက်ရှိ၊ မြန်မာ၊ ရန်ကုန်၊ သင်နှင့်မကြာမှီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတစ်ခုကိုစီစဉ်နိုင်လိမ့်မည်။ အွန်လိုင်းမှဆရာတစ် ဦး ကိုသင်လိုချင်ပါကသင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသွားနိုင်သည်။ မြန်မာ၊ ရန်ကုန်ရှိ JapaNeeds သို့ ဆက်သွယ်၍ အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်သင်နှင့်အနီးရှိသင်ခန်းစာများအတွက်အွန်လိုင်းမှဆက်သွယ်ပါ။
ဒေသအလိုက်ဂျပန်အကြောင်းကိုမေးမြန်းလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ။
အမှတ် ၁၀၀၊ နတ်မောက်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ (P.O. Box ကို 841) ဖုန်း: (95-1) 549644-8
ဆရာများသည်ဖော်ရွေခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ အလွန်အထောက်အကူပြုခြင်းဖြစ်ပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဘာသာစကားကိုသင်ယူနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏နေရင်းနိုင်ငံသို့ပြန်လာပြီးနောက်၌ပင်ကျွန်ုပ်၏သင်ယူမှုသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ကျွန်ုပ်၏သင်တန်းကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသောဆရာတစ် ဦး မှသင်ကြားခဲ့ပြီးဂျပန်စာကိုဆက်လက်သင်ယူရန်လှုံ့ဆော်မှုခံခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်အလုပ်အရမ်းအလုပ်ရှုပ်နေရင်တောင်သူကအမြဲအားပေးတယ်။
မည်သည့်ပြissuesနာကိုမဆိုဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ညှိနှိုင်းရေးမှူးတစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ကျောင်းသားများသည် HH JapaNeeds ကိုရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်သာပေးသည်။
သင်သည်ဂျပန်စာသင်ယူရုံထက်များစွာပိုရမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဂျပန်အွန်လိုင်းကိုလေ့လာခြင်းသည်သင်၏ဘာသာစကားစွမ်းရည်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းမျှသာမဟုတ်ပါ။ သင်၏ဘဝကိုကြွယ်ဝပြည့်စုံစေရေးလည်းပါ ၀ င်သည်။ သင်၏ဘဝပိုမိုချမ်းသာလာပါကသင်ပိုမိုကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ပြီးလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကောင်းကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ HH JapaNeeds အွန်လိုင်းမှကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသင်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကမ္ဘာကြီးသို့တံခါးဖွင့်ရန်သင့်လမ်းပြများဖြစ်လိုသည်။
အထိန်းများသည်စိတ်ကြိုက်လေ့လာထားသောအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးပြီးတိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြသည်။ Nijongo၊ JLPT (ဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ) N5၊ N4၊ N3၊ N2၊ N1 သင်တန်းများနှင့်သင်နှင့်သင်၏အိမ်၊ ရုံး၊ ကဖေးနှင့်အွန်လိုင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများနှင့်စတင်စကားပြောသူများအတွက် Hiragana၊ Katakana၊ အခမဲ့လူတန်းစားကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဘာကြောင့်ငါတို့ဂျပန်စာနည်းပြဆရာတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးမင်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေကိုမဖြည့်ဆည်းပေးတာလဲ။ သင့်ရဲ့အထိန်း။ သင်၏အချိန်။ သင့်တည်နေရာ။ ယနေ့သင်၏ဂျပန်ဘာသာစကားကိုစတင်လိုက်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ဂျပန်စာသင်ယူခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများကိုဂျပန်နှင့်ပတ်သက်သောကန ဦး ထင်မြင်ချက်များကိုမေးသောအခါအများစုက“ ဒါဟာငါထင်တာထက်အများကြီးပိုလွယ်တယ်” ဟုဖြေကြသည်။ သူတို့က “ဂျပန်စာဖတ်ရတာခက်ခဲပေမဲ့စကားပြောရတာအရမ်းကိုအံ့သြဖို့ကောင်းတယ်” ဟုလည်းပြောကြားခဲ့သည်။
တကယ်တော့ဂျပန်အွန်လိုင်းကိုသင်ယူခြင်းသည်အခြားဘာသာစကားများနှင့်မလွယ်ကူပါ။ ဂျပန်သဒ္ဒါသည်အနောက်တိုင်းဘာသာစကားများထက် ပို၍ ရိုးရှင်းပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များကိုသတိပြုပါ။
အင်္ဂလိပ်နှင့်ပြင်သစ်လိုကျား၊ မ (ပုလ်၊ ,တ္၊ စ) နှင့်ဆောင်းပါးများ (အဓိပ္ပါယ်နှင့်အသတ်မရှိသောနာမ်စား) မရှိပါ။
ဂျပန်ကြိယာများသည်အင်္ဂလိပ်ပုံစံနှင့်ပြင်သစ်လိုဘာသာရပ်ပေါ် မူတည်၍ သူတို့၏ပုံစံကိုမပြောင်းပါ။
ကြွယ်ဝသောဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုသည်ဤလှပသောဘာသာစကားကိုသင်ယူရန်လှုံ့ဆော်မှုများစွာပေးသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာသာစကားသင်ယူရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းပဲဖြစ်ပါစေ၊ ဂျပန်စာကိုသင်သုံးတဲ့အချိန်ဟာအဆင့်များစွာနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းပါတယ်။ လူတိုင်းတွင်ဂျပန်စာသင်တန်းတက်ရန်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းပြချက်ရှိသည်။ သို့သော်သင်မသိသေးသောကောင်းကျိုးများများစွာရှိသည်။ အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြရန်သင်သည်ဂျပန်နှင့်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနားလည်လာလိမ့်မည်။ သင်သည်လည်းမိတ်ဆွေများရလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်ယုံကြည်မှုရရှိပါလိမ့်မယ်။
အကယ်၍ သင်သည်တစ် ဦး ချင်းတစ် ဦး ဂျပန်အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါက HH JapaNeeds၊ မျက်နှာချင်းဆိုင်နှင့်အွန်လိုင်းကျူရှင် ၀ န်ဆောင်မှု၏ကျူရှင် ၀ န်ဆောင်မှုမှစတင်ပါ။ အခမဲ့ရုံးသုံးလူတန်းစားရှိပြီးအရည်အသွေး ၁၀၀% အာမခံထားသည်။
မိတ်ဖက်အတန်းများသည်တတ်နိုင်ပြီးလက်တွေ့ကျသည်။ ဒီသင်တန်းတွေဟာဘတ်ဂျက်ငွေရပြီးအရည်အသွေးကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေလိုချင်သူတွေအတွက်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ဂျပန်စာကိုသင်ယူရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ E-Language Learning သင်တန်းကိုစတင်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုဂျပန်ကိုစိတ်ဝင်စားသူအားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတန်းများကိုအတွေ့အကြုံရှိသောဂျပန်ဆရာများမှသင်ကြားပြီးအလုပ်သို့မဟုတ်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သို့မဟုတ်ဂျပန်စာကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်တိုးတက်လိုသူများသို့မဟုတ်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်တန်းများကိုသင်၏အိမ်၊ ရုံး၊ အွန်လိုင်း (သို့) သင်ရွေးချယ်သောအခြားအချိန်နှင့်နေရာတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဂျပန်ဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုရှာဖွေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက်ဘာသာစကားသင်ယူမှုမှတစ်ဆင့်သင်၏ဂျပန်ကိုတိုးချဲ့ပါ။ သင်၏ဘာသာစကားသင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုထုတ်ဖော်ပါ။ သင်၏ဂျပန်ဘာသာစကားအိပ်မက်များကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပြည့်စုံစေပါ။
အွန်လိုင်းမှကျူရှင်ဆရာတစ်ယောက်နှင့်ဂျပန်စာကိုလေ့လာခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်။ သင်အောင်မြင်လိုသောသင်၏အားသာချက်များ၊ အားနည်းချက်များနှင့်ပန်းတိုင်များကိုဆရာကနားလည်လိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်စိတ်ကြိုက်လေ့လာသင်ယူမှုအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးပြီးတိုးတက်မှုလိုအပ်သည့်နေရာများကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်သင်နှင့်အတူတကွပူးပေါင်းပါလိမ့်မည်။ Nijongo၊ JLPT (ဂျပန်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ) N5၊ N4၊ N3၊ N2၊ N1 သင်တန်းများနှင့်သင်၏အိမ်၊ ရုံး၊ ကော်ဖီ၊ အွန်လိုင်းနှင့်အခြားနေရာများတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများနှင့်စကားပြောဆိုနိုင်သည်။ အခမဲ့လူတန်းစားကိုကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဘာကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားနည်းပြဆရာတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးဒီနေ့မင်းရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေတွေကိုချဲ့နိုင်တာလဲ။
သင့်ရဲ့အထိန်း။ သင်၏အချိန်။ သင့်တည်နေရာ။ ယနေ့သင်၏ဂျပန်ဘာသာစကားကိုစတင်ပါ။
မြန်မာနိုင်ငံကို ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်လက်ရှိတိုင်းပြည်အမည်ဟုမခေါ်မသမုတ်မှီအထိဗမာကိုခေါ်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ ၀ င်း ဦး ဆောင်သောစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုသည် ၁၉၆၂ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး၊ ထို့နောက်ဗမာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်သို့ဆောင်ပုဒ်အရအထီးကျန်ဆန်မှုနှင့်နီးစပ်ခဲ့သည်။ ထိုကာလအတောအတွင်းတိုင်းပြည်၏နေရာအနှံ့အပြားတွင်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့်လွတ်လပ်ရေးရပြီးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရန်ကြိုးပမ်းမှုများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ လတ်တလောတွင်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတိုးတက်နေပြီး၊ ဆင်ဆာစနစ်ဖျက်သိမ်းခြင်းကဲ့သို့သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဖွင့်လှစ်မှုများသည်တိုးတက်နေပြီးအဓိကအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်ကောင်းသောဤမြန်မာနိုင်ငံတွင် HH Japa Needs ဂျပန်နည်းပြဆရာနှင့်ဂျပန်စာမသင်သနည်း။